नोभेम्बर 8, 2008 at 6:23 अपराह्न टिप्पणी छोड्नुहोस्	सजिवनको तेलले गाडी चल्यो’ वर्तमान नेपालका लागि ज्यादै महत्त्वपर्ूण्ा समाचार हो यो । डिजलको विकल्पमा अर्काे र्सवसुलभ इन्धनको आविष्कार र विकास नभएसम्म हाम्रा लागि सजिवन भरपर्दाे ऊर्जा हुनेछ । र, किसानको राम्रो आयस्रोत बन्नेछ । सजिवनको तेलले ट्याक्टर गुडाउने सफल प्रयोग गरेकामा पाल्पाली केशव कार्कीलाई धेरै बधाई † उनका पनि पे्ररक रूपन्देही मणिग्रँमका प्रयोगकर्ताको नाम प्रचारमा आएन उनलाई अघिल्लो बधाई †नेपालमा सजिवन इन्धनको परिकल्पना र अनुसन्धान झन्डै दर्ुइ दशकअघि त्रिविअर्न्तर्गत ‘रिकास्ट’ ले शुद्ध गरेको थियो । केही वर्षछि बुटवल टेक्निकल इन्स्िटच्युटका इन्जिनियर रामेश्वर महर्जनले सजिवन तेलले डिजलको काम गर्ने ल्याब परीक्ष्ँणबाट प्रमाणित गरेका थिए ।
सजिवनमात्र होइन, तेलहन समूहका चिउरी, अ“डीर, कुसुम, महुवा, आ“खातरे, साल, तिंजु, माल कागुनो, बकेनो, रेपसिड आदि पचासौं थरी बोट वनस्पति फैलिएका छन् । दूध र घिउ दुवै दिने चिउरीका बोट देशमा पचास लाख भएको अनुमान छ । यसको प्रशोधन गरिएमा वनस्पति घिउको छेलोखेलो हुनेछ । अ“डीर -अन्डी) को तेललाई तर्राईका किसानले लडियाका पांग्रँमा मोबिल र ग्रिसका रूपमा पुखौर्ंदेखि प्रयोग गर्दै आएका छन् । क्यास्ट्रल आयलको नामले औषधि र अन्य उपयोगमा यो जगत विख्यात छ । आयर्ुवेदले यसलाई बाथरोगको र्सवश्रेष्ठ औषधि भनेको छ । यसखाले अधिकांश तेल प्रशोधन र मिश्रणद्वारा इन्धनका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यी डिजल पेट्रोलझैं सीमित मात्रामा नभई अनन्तकालसम्म पुनः उत्पादन हुनसक्छन् । दुःखको कुरा, नेपालका उद्योगपतिमा आफ्नो देशका यस्ता कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग चलाउन जा“गर देखापरेको छैन । मैले हुलासचन्द्र गोल्छालाई चिउरीको घिउ परीक्ष्ँण र प्रशोधन गरी वनस्पति घिउमा प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको थिए“ । उद्योगपति हरि पाण्डेलाई सजिवनको तेलबाट गाडी चलाउने पहिलो संस्था बनाउन विशेष आग्रह गरेको थिए“ । यस्ता र्सवसुलभ कच्चा पदार्थको सदुपयोग गरी पार्टर्ीीार्यकर्ता र जागरुक युवालाई उत्पादनशील बनाउन अभियान चलाउन आफ्नै केन्द्रीय समितिमा पनि सुझाव राखे“ । सबै कामना निस्फल भए । तर लुम्बिनीको युवा जा“गरले हटाइदिन लागेकाले मेरा कलमले अचानक नारा लगायो- सजिवन ऊर्जा, जिन्दावाद †
Entry filed under: energy, knowledge, Nepal, technology. Tags: .	World’s Tallest & First Inner City Harbor : Nakheel Tower & Harbor	Walking-assist-device from Honda	जवाफ लेख्नुहोस् जवाफ रद्द गर्नुहोस्	Enter your comment here...